मकै सुन्दरीको संघर्ष-कथा ⋆ JINDAGANI.COM
Home » मकै सुन्दरीको संघर्ष-कथा
साउन २१, २०७४	0	By शकुन्तला जोशी
सीता वाइवा (४०)को सपना नर्स बन्ने थियो । सेतो लुगा लगाएर सेतै फूलले कपाल सजाएर बिरामीको सेवामा जुट्ने नर्स देख्दा उनमा पनि त्यस्तै सपना आएको थियो । तर, अहिले थापाथली चोकमा दिनभरि तगारीमा मकै पोल्छिन् । प्रसूति गृहका नर्स उनका ग्राहक हुन् ।
भन्छिन्, ‘सपनै त देखेको हो । स्कुलको मुखै नदेखेकी गरिब टुहुरीको सपना कहाँ पूरा हुनु ।’ उनी दैनिक सयदेखि डेढसय घोगा मकै बेच्छिन् । त्यसबाट एक हजारदेखि १२ सय रूपैयाँसम्म कमाउँछिन् । मकै पोलेरै उनले चार जनाको परिवार पालेकी छन् । नुवाकोटमा जन्मेकी उनी र उनको परिवार वागमती पुलमुनि सुकुम्वासी बस्तीमा बस्छन् । बस्ती नब्युँझँदै उनको दिनचर्या चार बजेदेखि शुरु हुन्छ ।
झिसमिसेमै नाम्लो र बोरा बोकेर मकै लिन कालिमाटी पुग्छिन् । मधेशबाट एक ट्रिप मात्र आउने हुँदा मकै किन्न मारामार हुने उनी बताउँछिन् ।
भीडमा सक्नेले राम्रो मकै उठाइहाल्छन् । उनी पनि भीडमा लडाइँ गरेर रामै्र घोगा छान्छिन् । मध्याह्नदेखि मकै पोल्न थाल्छिन् । भन्छिन्, ‘खै ! मकै पोल्दा–पोल्दा यो आगोले मेरो शरीरको रगत पनि सुकायो कि कसो ?’
पति आक्कलझुक्कल मात्र घर आउने, आए पनि खासै कुरा नगर्ने । उनको दुःख बिसाउने कोही हुँदैनथ्यो । बस्दै जाँदा छोरी जन्मिइन् । खासै जग्गा जमिन थिएन । परिवारले रक्सी बनाउने रहेछ । २/४ पैसा हात परे छोरीलाई न्यानो लुगा लगाइदिन हुन्थ्यो भन्ने सोचेर उनी पनि त्यही गर्न थालिन् । तर, उनले पैसा कमाएको सासूलाई मन परेन । झगडा पर्न थालेपछि उनी फेरि पति खोज्दै काठमाडौं आइन् । तर, विश्वासले गाँसेको सम्बन्धले उनलाई खासै न्यानो दिएन ।
ती दिन सम्झँदा आज पनि उनको मन अमिलो हुन्छ । त्यसपछि पनि पतिले कोठा भाडा नतिर्ने, रासन पनि नल्याइदिने गर्न थालेपछि उनी फेरि गाउँ फर्किन् । गाउँमा जति गरे पनि टिक्नै सकिनन् । कलिला लालाबाला टिपेर फेरि काठमाडौं आइन् र साबुन कारखानामा काम गर्न थालिन् । तीन हजार रूपैयाँले महिना चलाउन मुस्किल पथ्र्यो । उनी छोरा सुताएर आधारातसम्म गलैँचाको ऊन बाट्थिन् । त्यसबीच उनको जीवनले अर्को मोड लियो । गलैँचा उद्योगको ठेकेदार तेजबहादुर गोलेसँग उनको चिनजान भयो ।
सीता वाइवा / तस्वीर: सुनिता डंगोल
छोराछोरीको पेट बढ्दै गयो । दुवै जनाको कमाइले पनि परिवार पाल्न मुस्किल पर्न थालेपछि उनीहरू साथीको सल्लाहमा दशकअघि हालको थातथलोमा बास बस्न आइपुगे । जिन्दगी कहिले पो सजिलो थियो र, यहाँ आएपछि उनले पसिना वागमतीको बालुवामा मिसाउन थालिन् । पतिसँग मिलेर उनी दिनभरिमा ५०/५५ डोको बालुवा निकालेर बेच्थिन् । त्यति गर्दा उनको परिवारको गुजारा मुस्किलले चलेको थियो । त्यहाँ मालिकको खप्की खानु पर्दैनथ्यो, पारिश्रमिकको चिन्ता पनि नहुने । जति हुन्थ्यो आफ्नै कमाइ ।
उनलाई नर्स पढाउने चाहना थियो । तर, आम्दानीले भ्याउँदैनथ्यो । छोरी अहिले स्नातक प्रथम वर्ष अध्ययरत छिन् । छोराले उनको सपनालाई खुट्टा टेकाउन सकेनन् । बीचमै पढाइ छाडेका उनको भविष्यको चिन्ताले अहिले निद्रा बिथोलेको छ ।
कुनै समय थियो, दाजुभाउजूसँग उनी राजधानीका सिनेमा हलमा पुग्थिन् । पाँच रूपैयाँ तिरे बाल्कोनीमै बसेर सिनेमाको मजा लिन सकिन्थ्यो । ‘त्यसबेला म जानीनजानी फिलिमको गीत गुन्गुनाउँदै धागो बाट्थेँ । भाउजूहरू जिस्क्याउँथे लौ ! हिरोनी हुने भइन् हाम्री सीता,’ थोते गिजा देखाउँदै मुस्कुराइन् उनी, ‘तर, व्यवहार र दुःखले किच्दै लगेपछि रमाइलो भन्ने कता भाग्यो खै !’